။ဒသာဆိုတာ အချိန်ကာလကိုလိုက်၍ အကျိုးပေး တာကိုဖေါ်ပြဖို့ တွက်ချက်ထားတဲ့ ဂြိုလ်တို့ရဲ့ အားပေးချိန်ဖြစ်ပါတယ် ဒသာစနစ်များစွာဖတ်ဖူးပါတယ် ပြည့်ုပြည့်စုံစုံ ဖတ်ဖူးတာက ၀ိသောတ္တရီဒသာစနစ်နဲ့ နက္ခတ္တိကာဒသာစနစ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီစနစ်ကို အသုံးပြုရမယ့်သူများကတော့ လဆန်းရက်မှာမွေးပြီးညဖွားတဲ့သူတွေနဲ့ လဆုတ်ရက်မှာမွေးပြီးနေ့မွေးသူတွေအတွက် ၀ိသောတ္တရီကို သုံးရပါမယ်တဲ့ ဒီစနစ်မှဲာဂြိုလ်နဲ့ဂြိုလ်သက်တွေက
စုစုပေါင်း ၁၂၀နှစ်ဖြစ်ပါတယ် တွက်ပုံက ၂လာရဲ့ ရပ်ရာကနေ တွက်ရတာပါ ဥပမာ
ဒီဇာတာလေးကိုဥပမာတွက်ရအောင်ဗျာ ၂လာက ၈ ရာသီ ၁၅ အင်သာ ၄၃ လိတ္တာ ကိုပဲယူတွက်ပါမယ် ဒီနေရာမှာ နက္ခတ်တွေပြန်လိုလာပါတယ်
၂လာက ၈ ရာသီ ၁၅ အင်သာ ၄၃ လိတ္တာဆိုတော့
ဒီထဲမှာရှိတော့ ၂တနင်္လာဂြိုလ်ဟာ ပြုဗ္ဗာသဌ်နက္ခတ်ဧရိယာမှာရှိပါတယ်
စိုးမိုးဂြိုလ်က ၆ကြာဖြစ်ပြီး ဂြိုလ်သက်က ၂၀ နှစ်ပါ
ဒီမှာထပ်တွက်ရမှာက အဲဒီ ၂၀နှစ်ဟာ ၈ရာသီ ၁၃အင်သာ ၂၀လိတ္တာကနေ ၈ရာသီ ၂၆အင်သာ ၄၀လိတ္တာထိ ဆိုလိုတော့ ဒီ ၂ လာက ဘယ်လောက် ရောက်နေပြီလဲတွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
၂လာရောက်နေတဲ့ နေရာ ၈ ရာသီ ၁၅အင်သာ ၄၃လိတ္တာ ထဲကနေ
ပြုဗ္ဗါသဌ်နက္ခတ်အစဖြစ်တဲ့ ၈ ရာသီ ၁၃အင်သာ ၂၀လိတ္တာ ကိုနှုတ်ယင်
၀င်လာတဲ့ ၂လာရဲ့ ၀ ရာသီ ၂အင်သာ ၂၃လိတ္တာ ကိုရပါတယ်
လိတ္တာဖွဲ့ယင် ၂ အင်သာ= ၂x၆၀=၁၂၀ လိတ္တာ
၂ အင်သာ ၂၃ လိတ္တာ= ၁၂၀+၂၃= ၁၄၃ လိတ္တာ(နက္ခတ် ဧရိယာထဲသို့ ၂ လာဝင်လာသော လိတ္တာ)
နက္ခတ်တခုရဲ့အကျယ်က ၀ ရာသီ ၁၃အင်သာ၂ ၀လိတ္တာ
ဒါကြောင့် ၁၃ အင်သာ ၂၀လိတ္တာ= ၈၀၀ လိတ္တာ
နက္ခတ်စိုးမိုးဂြိုလ်က ၆ကြာဆိုတော့ ၂၀ နှစ် အချိုးချယင်
၈၀၀ လိတ္တာ= ၂၀ နှစ် ၁၄၃ လိတ္တာ=?=(၁၄၃/၈၀၀)x၂၀ နှစ်=၃.၅၇၅ နှစ်=၃ နှစ် (၀.၅၇၅x၁၂=) ၆.၉ လ=၃ နှစ် ၆ လ (၀.၉x၃၀=) ၂၇ ရက်
ဒါ့ကြောင့် ၂ လာဟာ ပြုဗ္ဗာသဌ် နက္ခတ်ရဲ့ အနှစ် ၂၀ ထဲကို ၀င်လာတာ ၃ နှစ် ၆ လ ၂၇ ရက်ရှိပါပြီခင်ဗျာ
ဒီနက္ခတ်ထဲမှာ ကျန်သေးတဲ့ ရက်ကတော့ (၂၀ နှစ် - ၃ နှစ် ၆ လ ၂၇ ရက်=) ၁၆ နှစ် ၅ လ ၃ ရက်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်
ဒါကို ဒသာနှစ်ကြွင်းလို့ခေါ်ပါတယ် same horo software မှာ “ ဒသာနှစ်ကြွင်း ၁၆ နှစ် ၅ လ ၁ ရက် ၆ကြာ” ပြထားပါတယ်
သူက အသေးစိတ် ၀ိလိတ္တာတွေယူတွက်တာရယ် ကျွန်တော်က တလရက် ၃၀နဲ့ ယျေဘုယျယူတာရယ်ကြောင့် ၁ ရက်ကွာသွားပါတယ် ဒီ “ ဒသာနှစ်ကြွင်း ၁၆ နှစ် ၅ လ ၁ ရက် ၆ကြာ”ဆိုတာတွက်လို့ရယင် samehoro က ဘယ်ဘက်က အချိန်ပြဇယားကလည်းတွက်ရပါပြီ လွယ်ပါတယ်ဗျာ ဂြိုလ်တွေကလည်း ဇယားထဲကလို စဉ်ထားတယ်ဗျာ
မွေးနေ့ ၁၉၈၄ ၁လ ၃ရက်မှာ ၆ကြာအတွက်လက်ကျန် ၁၆ နှစ် ၅ လ ၁ရက်ပေါင်းတော့ ၂၀၀၀ ၆လ ၄ရက်ကိုရပါရော နောက်တော့ ၁ နွေရဲ့ ၆ နှစ် ၂ လာရဲ့ ၁၀ နှစ်တွေထပ်ပေါင်းတော့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းက ဇယားရပါရောဗျာ အဲဒီ ဇယားကို ဒသာဇယားလို့ခေါ်ပါတယ်
အလယ်ကဇယားကို ဆက်လေ့လာပါစို့ ၂၀၀၆ ၆လပိုင်း ၄ ရက်ကနေ ၂၀၁၆ ၆လပိုင်း ၄ရက် ထိ (၂လာဂြိုလ်ရဲ့ ဒသာကို) ထပ်မံခွဲစိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် သူ့ကို အန္တရဒသာဇယားလို့ခေါ်ပါတယ် တွက်ပုံက မူလက ၂လာရဲ့ ဂြိုလ်သက် ၁၀ နှစ်ကို ထပ်ပိုင်းပြီး အားလုံးပြန်ပေါင်းယင် ၁၀ နှစ်ပြန်ရရမယ် အချိုးကျလည်းဖြစ်ရပါမယ်
၁၀ နှစ် x(၁၀/၁၂၀)=၁၀ လ (၂x၂)
၁၀ နှစ် x( ၇/၁၂၀)=၇ လ (၂x၃)
၁၀ နှစ် x(၁၈/၁၂၀)=၁နှစ် ၆ လ (၂x၈)
၁၀ နှစ် x(၁၆/၁၂၀)=၁နှစ် ၄ လ (၂x၅)
၁၀ နှစ် x(၁၉/၁၂၀)=၁နှစ် ၇ လ (၂x၀)
၁၀ နှစ် x(၁၇/၁၂၀)=၁နှစ် ၅ လ (၂x၄)
၁၀ နှစ် x( ၇/၁၂၀)=၇ လ (၂x၉)
၁၀ နှစ် x(၂၀/၁၂၀)=၁နှစ် ၈ လ (၂x၆)
၁၀ နှစ် x( ၆/၁၂၀)=၆ လ (၂x၁)
စုစုပေါင်း =၁၀နှစ် ဖြစ်ပါတယ် ဥပမာ (၂x၆) က ၂လာဒသာ ၆ကြာ အန္တရဒသာကို ညွန်းပါတယ် နောက်နောင်မှာ ဒီလိုပဲဖေါ် ပြပါမယ်ခင်ဗျာ
ညာဘက်ဆုံးဇယားကို ပြတ္တန္တရဇယားလို့ခေါ်ပါတယ် (၂x၈) ကို ထပ်မံခွဲစိတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (၂x၈x၈),(၂x၈x၅),(၂x၈x၀), . . .,(၂x၈x၃)ထိဖြစ်ပါတယ်၊
အဟောများမှာ မပါမဖြစ်လို့ သူ့ကို အယင်ဖေါ်ပြတာပါ
ဒုတိယ စနစ်ဖြစ်တဲ့ နက္ခတ္တိကဒသာစနစ်ကို ဒီ link မှာဖတ်နိုင်ပါပြီ
Oh My God!! This is so complicated!! to be an astrologer, you must be master brain!!
22 February 2010 at 03:27